Ukuqeqeshwa KweLabrador Kwabanikazi Abasha: Umhlahlandlela Ophelele - Ukuqeqeshwa Kwezinja
AmaLabradors yiwona inja yomndeni yakudala , ngezinqwaba zamandla nobuntu obudlalwayo, akumangazi ukuthi yizilwane ezithandwa kakhulu e-US. Siyakuhalalisela ngokuthi ukhethe owinile, wamukelekile emhlabeni wamaLab!
Ukuba nomdlwane kuwumthwalo omkhulu, umzamo omkhulu nokubekezela kuyadingeka ukukhulisa umngane womndeni onobungane. Imidlwane yeLab igcwele ububi nokuzijabulisa, ngakho-ke kubalulekile ukuthi abazali babo babe nobuntu obufanayo!
Kunezinto eziningi okufanele uzenze ngaphambi kokuletha inja yakho ekhaya.
Kufanele ucabange ngemithetho yasendlini, usethe izindawo eziphephile / zekhreyithi, uqiniseke ukuthi unamathoyizi amaningi nokuhlafuna (iLabradors iyathanda ukuhlafuna), futhi iqinisekise nomdlwane yonke indlu.
Lo mhlahlandlela uzohlanganisa konke okuyisisekelo okudingeka ukuthi umfundi weLabrador afunde, aqeqeshe amaLabradors, nokuthi angakwenza kanjani kangcono ngohlelo lwezigaba eziyisikhombisa.
Ukuqeqesha Umdlwane waseLabrador
Ungayiqeqesha Kanjani Potty I-Labrador Puppy
Qeqesha I-Labrador Puppy Hhayi Ukuluma
Ungayisusa Kanjani Isitimela I-Labrador
Ukufundisa I-Labrador Yakho Ukuza (Khumbula)
Ungasifaka Kanjani Isitimela I-Labrador
Ungayiqeqesha Kanjani I-Labrador Puppy Ukuhlala Nokuhlala
Fundisa I-Labrador Yakho Ukuhlala
Qeqesha Ilebhu Yakho Ukuhlala
Ukuqeqeshwa kweLabrador kufanele kuqale ngokushesha . Ukugcina kumnandi futhi kungaguquguquki kuzosiza ekwakheni ubudlelwano bokuthembana.
Lokhu kubaluleke kakhulu ngohlobo oluthile oluhambisana nathi, ufunda ngakho konke ukuxhumana esinakho! Akuyona ingozi ukuthi iLabradors isetshenziswa kakhulu njengezinja zensizakalo; bahlakaniphile impela.
AmaLabradors adume ngokugqugquzela ukudla kakhulu. Ama-24% weLabradors anokushintshwa kwezakhi zofuzo okuhambisana nako ukukhushulwa kokudla okwandisiwe .
Imidlwane yelabhu yokuqeqesha isebenzisa ukuqiniswa okuhle (njengokudla noma ukudlala) kuzodala ubudlelwano bokuthembana futhi ukunciphisa amathuba zazo ezibonisa ukuziphatha okungathandeki!
Ukuqeqeshwa kwamabhodlela umdlwane waseLabrador imvamisa kuyinto yokuqala oyofuna ukuqala ngayo. Kungcono ukugwema ukusebenzisa amaphedi noma izindawo zangasese zangaphakathi , njengoba lokhu kudida kakhulu inja.
Esikhundleni salokho, kufanele uthathe i-Labrador yakho uyikhiphele egcekeni njalo usebenzisa inqubo ebekiwe. Kufanele uthathe umdlwane wakho uye nawo engadini:
Ngemuva kwezikhathi zokudlala
Ngemuva kokuvuka ngemuva kokusnuza
Uma ungaphandle, mane ulinde ukuthi baye endlini yangasese. Khumbula uLabradors uyakuthanda ukudlala, ngakho-ke ngeke kube yinto engavamile uma ingane yakho iphazanyiswa izitshalo noma amathoyizi. Mlinde aphume ukuze abhoreke, futhi ekugcineni uzohamba-potty. Lapho enza lokho, mklomelise ngesimanga esihle.
Nalu uhlelo lwezikhathi zamanzi lwePuppy enamasonto ayisishiyagalombili ubudala ; lezi zikhathi zinganwetshwa kancane kancane lapho umdlwane wakho ukhula.
6:30 - 7:30 Vuka, Potty, Zoomies futhi udlale, Ukudla kwasekuseni, Potty!
7:30 - 8:30 ILANGA
8:30 - 9:00 Vuka, Potty, Training (hlala / ukhumbule / uhole ngokukhululeka) kufakwe ukudlala, Potty!
9:00 - 11:00 ILANGA
11:00 - 12:30 Vuka, Potty, Lunch, Potty, Isikhathi sokudlala, Potty
12:30 - 14:00 ILANGA
14:30 - 15:30 Amanzi! Ukuqeqeshwa kufakwe umdlalo wokudlala, Potty!
15:30 - 16:30 ILANGA
16:30 - 18:00 Vuka, Potty! Ukudlala ngamathoyizi, ukuzidlalela, Isidlo sakusihlwa, Amanzi
18:00 - 19:00 ILANGA
19:00 - 20:00 Vuka, Potty, Play (ukuhlafuna), Potty, Ukulala
Uma i-lab puppy yakho inenkinga ngaphakathi (futhi kuzokwenzeka ngenyanga yokuqala ngakho-ke lungela), gwema ukumemeza noma ukumjezisa . Ngeke aqonde ukuthi konakelephi!
Esikhundleni salokho, hlanza ukungcola bese uzikhumbuza ukuthi uzomkhipha njalo.
Njengoba ikhula, iLabrador yakho izofunda ukubamba isinye isikhathi eside, futhi yazi ukuthi kuyinto enhle ngempela ukuthi 'go-potty' ngaphandle, kunokuba ngaphakathi.
Ukufundisa umdlwane wakho ukungakhulumi noma ukuluma kuphezulu ku-ajenda yabazali be-puppy, ikakhulukazi labo abanezingane endlini.
Imidlwane idume ngokuba nomdlandla futhi iyadlala, kepha ngalokhu kuza ukuthambekela kokusebenzisa umlomo wayo. Lokhu kujwayelekile impela, futhi yonke imidlwane izosebenzisa umlomo wayo ukuhlola, noma kunjalo kukuwe ukuthi ubafundise ngobumnene ukuthi lena akuyona indlela abadlala ngayo.
Iningi lemidlwane izokhuluma ngomlomo lapho likhathele ngokweqile, lilambile, noma lidinga indlu yangasese, ngakho-ke qiniseka ukuthi uwufakele umdlwane wakho inqubo yokulala , ukudla kusatshalaliswa usuku lonke namakhefu amaningi ethoyilethi.
Kungcono kuqala ukuzama ukuqondisa umdlwane wakho kuthoyizi lapho uxhumana nabo , ukuze bafunde ukukhomba amathoyizi kunezandla lapho bedlala noma bephululwa.
AmaLabradors athanda ukuthanda amathoyizi amakhulu, athambile, anikezwe izimpande zawo zokubuyisa. Ngakho-ke qiniseka ukuthi amathoyizi onawo makhulu ngokwanele ukugcwalisa imilomo yabo ngokunethezeka ukuze ubambe kahle.
Uma umdlwane wakho ufuna ukudlala ngezandla esikhundleni sethoyizi (okungajwayelekile), kungcono ukuhoxisa konke ukunakwa kusuka kumdlwane wakho bese uyahamba. Lokhu kuzofundisa umdlwane wakho ukuthi lolu hlobo lokuxhumana alutholi ukuqhubeka noma ukunakwa.
Kubaluleke kakhulu ukuthi kuqinisekiswe ukuthi akekho noyedwa ekhaya ohlala ezindlini zakho zelebhu , njengoba lokhu kuzodideka ngenkathi befunda ukungalumi!
Ngokuvumelana, emasontweni amane kuya kwayisishiyagalombili okuqala, umlomo kufanele wehlise futhi iningi lomlomo kufanele ngabe limile ngezinyanga eziyisithupha ubudala.
Lapho uqala ukuqeqeshwa, khumbula, kanye nokulahlekelwa nokuthola amazinyo ngamazinga ahlukene, yonke imidlwane ingabantu ngabodwa futhi iyohluka! Kufanele uqiniseke ukuthi banamathoyizi amaningi okuhlafuna ukuze i-pup yakho ikudle futhi ikhulule ukungakhululeki kwabo - amathawula wetiye afriziwe angaba induduzo enkulu kwizinsini ezibuhlungu.
Imidlwane yelabhu yokuqeqesha i-Crate iyindlela enhle yokuqinisekisa ukuthi iphephile futhi ivikelekile uma ungekho ukuze uyigade. Lokhu kuzobuye kudale indawo lapho bengazimela khona uma sebekhathele impilo yomndeni!
Kuyalinga ukuthi ekuqaleni ugcwalise ikesi ngombhede omuhle, kepha lokhu ngeke kuhlale isikhathi eside ngeLabrador umdlwane. Ama-duvet amadala noma izingubo zokulala zilungile, futhi kufanele uqiniseke ukuthi ubeke ikesi lakhe endaweni ethulile lapho ezokwazi khona ukubona umndeni wakhe.
Indlela enhle yokwethula ikesi ukufihla ukuphatha 'ukumangala' lapho ukuze akuthole ngokuthanda kwakhe. Lokhu kuzomfundisa ukuthi le yindawo enhle angazikhethela yona futhi uzochitha isikhathi esiningi lapho.
Kufanele futhi ukondle ukudla kwakhe ku-crate (usebenzisa uhlobo oluthile lokudla okuhamba kancane njenge-Kong efriziwe) ukwakha ubudlelwane obuhle.
Ngemuva kwesonto lokuqala lokwakha i- ukuzihlanganisa okuhle , Zama uku wandise kancane isikhathi esichithwa ekwakhiweni umnyango uvaliwe . Kufanele uqhubeke nokunikeza ukudla kwakhe lapho bese uvala umnyango ngenkathi edla. Uqeda nje ukudla, avule umnyango.
Ungabe uselula isikhathi lapho umnyango uvaliwe ngemuva kokuqeda ukudla kwakhe. Ezikhathini ezimbalwa zokuqala ungahle ume isikhashana imizuzwana ngemuva kokuba eseqedile ngaphambi kokuvula umnyango ukuze afunde ukubhekana nokuvalwa komnyango, bese kancane kancane wakha leso sikhathi ngezinsuku.
Ungasebenzisa i-labrador crate schedule schedule ngezansi ukuthola isiqondiso:
Isheduli Yezikebhe Zokuqeqesha Amantombazane
Amaviki ayi-8 Imidlwane kufanele ikhiyiwe ekhreyini layo ubusuku bonke (kahle eceleni kwakho ukugwema ukucindezeleka)
Amaviki ayi-12 Ngalesi sikhathi, kufanele ukuthi umdlwane ushiywe imizuzu engama-30
14 amasonto Ngokuqeqeshwa okuqhubekayo, umdlwane ungashiywa kuze kufike ehoreni elilodwa
Amaviki ayi-16 Ngokunokwenzeka bangafinyelela emahoreni ama-2 ngale minyaka
Ufuna ukumgwema akhombise noma yikuphi izimpawu zokuhlupheka . Uma eqala ukukhala, linda isikhashana ukuthula, ngaphambi kokuvula umnyango wekesi bese ubuyela emuva ezigabeni ezimbalwa ngokuqeqeshwa!
Isikhathi esidingwa umdlwane ekhreyithini kuzoya ngokuthi unethezeke kangakanani. Izinja ezindala akumele zishiyiwe zivalelwe ekhreyithini isikhathi esingaphezu kwamahora amane ngesikhathi.
ILabrador Puppy Ibuyela Kumnikazi Wayo
Ngesikhathi sokuqeqeshwa komdlwane we-labrador, elinye lamakhono abaluleke kakhulu ukuba nekhono kusenesikhathi ukukhumbula. Leli yikhono eliwusizo kakhulu njengoba lingabuyisa iLabrador yakho ekujuleni kobubi.
NjengamaLabradors zivame ukuba nomdlandla ukuhlangana nezinye izinja nabantu, ukukhumbula okuqinile nokungaguquguquki kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi ungabiza inja yakho isuke kulabo abangafisi ukuhlanganyela.
Khetha igama (noma sebenzisa impempe / umsindo) bese usebenzisa lokhu kuphela ukukhumbula ukuqeqesha i-labrador yakho :
Qala ngokufundisa umdlwane wakho ukuthi leli 'cue word' = ukudla okumnandi. Yonke imidlwane yaseLabrador iyakuthanda ukudla kwayo! Izinsuku ezintathu, yisho 'igama lakho lokukhumbula' bese uletha ukudla ngokushesha.
Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, uma umdlwane wakho uza ngakuwe, qala ukusho lapho umdlwane wakho ukude, bese ubanika umvuzo wokudla lapho befika ezinyaweni zakho! Lokhu kuzosiza ukuhlobanisa izimpendulo ezisheshayo nesikhombi.
Lapho nje umdlwane wakho usuwuqonda umkhondo, ngaphandle kokwenza uqeqesho oluqondile, qala ngokubacela ukuthi beze lapho bekubheka ngebanga elincane phakathi kwakho. Qiniseka ukuthi usebenzisa kuphela inkomba yabo yokukhumbula lapho bengaphazanyiswa futhi bazophumelela ekuphenduleni!
Lapho bethola umbono, ungaqala ukusebenzisa umkhondo emakamelweni ahlukahlukene azungeze indlu, noma kunjalo qiniseka ukuthi umdlwane wakho ugxile kuwe ngaphambi kokusebenzisa umkhondo.
Lapho sebenombono walokhu ezungeze indlu nengadi, ungangeza kokuphazamisayo okumbalwa- uma unezingane, zibenze zigijime ngenkathi wenza ezinye izikhumbuzo - noma ucele umdlwane wakho ukuba eze kuwe lapho bayahogela engadini!
Ngemuva kwalokho ungaqala ukufakazela inkomba ekuhambeni. Khumbula, umdlwane wakho uzokuthola kunzima lokhu, ngakho-ke namathisela umugqa omude wokuqeqesha kwihhanisi lawo ukuze bakwazi ukuhlola ngokuphepha ngenkathi wakhe ukuqeqeshwa kwabo!
Khumbula lapho uqeqesha amalebhu, sebenzisa kuphela ukukhumbula kwabo lapho uqiniseka ngo-80% ukuthi bazobuyela kuwe . Ukukhumbula kude nokudlala neminye imidlwane kuwumsebenzi onzima impela, kungafana nokushiya iphathi njengoba iqala nje!
ILabrador Retriever Idonsela kuLeash
Ukuqinisekisa ukuthi ukuhamba kwakho kuyathandeka kini nobabili leash ukuqeqesha i-labrador yakho ibalulekile. Leli khono lifaka izinto eziningi ezahlukahlukene umdlwane wakho okufanele aziqonde futhi uzifunde:
Abakwazi ukufika njalo lapho bafuna ukufika khona manjalo, futhi kufanele bafunde ukubhekana nalesi sithikamezo esidabukisayo
Ukuchitha isikhathi eduze kukamama / ubaba kuyindawo engcono kakhulu ongaba kuyo njengoba bethola imiklomelo
Ukudonsa ekuholeni akubafikisi ndawo futhi kuphumela ekugcineni kokuya phambili
Ukuhlanganisa lezi zifundo ezintathu ndawonye, ​​kuzoqeqesha i-labrador yakho ukuba ikwazi ukuhamba ngokukhululeka kwe-leash! Ukuqeqesha ama-labradors ukuhamba kahle ezimeni eziningi ezahlukahlukene nezimo kungathatha izinyanga zomsebenzi onzima . Kodwa, ngohlobo olukhulu njengeLabrador, kubalulekile.
Okokuqala, klomelisa iLabrador yakho ngokudla ngokuba seduze kwakho ngemuva kokunamathisela ukuhola kwabo. Sifuna ukubanikeza umvuzo njalo ngokusondelana nathi noma ngokuhamba eceleni kwethu. Lokhu kuzosiza ukubaqeqesha ukuthi 'ukuzihlalela nokugxila kumama / ubaba kuyinto enhle'.
Uma umdlwane wakho uqala ukudonsa (futhi ukhumbule labo Labradors abadala ingafinyelela ku-80lb ), yeka ukuhamba ngokushesha . Lindela ukuthi babuyele ‘endaweni yobumnandi’ eseceleni kwakho. Ungakufezekisa lokhu ngokubayenga ngokubaphatha kahle, umklomelo bese uqala ukuhamba uye phambili futhi.
Lapho umdlwane wakho ufuna ukufika entweni ethile futhi ungakwazi, ubavuze lapho bebuyela kuwe!
Kujwayelekile impela ukuthi izinja zihogele futhi zihlole futhi asifuni ukukuyeka lokhu njengoba kuyingxenye ebalulekile yokuqinisekisa ukuthi ziyagcwaliseka! Qinisekisa ukuthi ukuhamba kwabo kulinganisiwe phakathi kokufunda ukusebenzisa i-leash ukuhamba nokuba nesikhathi esithile 'samahhala' sokugijima, sokudlala, nokuhogela .
Njengakho konke ukuqeqeshwa kwezinja ze-labrador, qala endaweni eyisicefe ekuqaleni, bese ukhulisa kancane kancane iziphazamiso.
Qala egcekeni lakho nomdlwane wakho wamasonto ayisishiyagalombili ubudala futhi lapho bevunyelwa ukuphuma (ngemuva kokujova kwabo) ukuhamba, bazobe besilungele lesi sinyathelo ekuqeqeshweni kwabo!
Njengawo wonke amakhono akulesi siqondisi, ukuhlala nokuhlala kokubili kubaluleke kakhulu ukufundisa i-labrador yakho. I-Sit yinto ewusizo ngempela ukuyiqeqesha, njengoba kungenye indlela enhle yokugxuma, noma nje njengokuziphatha okuhloniphekile ukufundisa umdlwane wakho ukuthi ukwenze ukuze 'ucele' izinto.
Khombisa injana yakho umuthi futhi uyibambe phakathi kwesithupha sakho neminwe embalwa yokuqala
Njengoba behogela umuthi omnandi, phakamisa isandla sakho uphakamise phezulu nangemuva phezu kwekhanda labo kancane
Imvamisa imidlwane ijwayele ukubeka phansi phansi, ngalesi sikhathi, ibaklomelise!
Phinda lokhu izikhathi ezimbalwa kuze kube bushelelezi
Lapho nje sebesifundile lesi siginali yesandla, manje usungangeza igama elithi 'hlala'
Yisho 'hlala' ngokucacile bese uhambisa isandla sakho ngendlela efanayo, ukuze umdlwane wakho ufunde umkhondo
Ngokuphindaphinda okuningi, umdlwane wakho uzokwazi 'ukuhlala' ngegama nje!
Gcina izikhathi zakho zokuqeqesha zifushane kakhulu . Zama ukwenza kuphela i-10 ilandelana ngaphambi kokuthola ikhefu, iLabradors ijwayele ukufuna ukuzigcina imatasa nokuhamba phakathi kwemisebenzi ngokushesha! Futhi zikhula ngokushesha okukhulu futhi kufanele uvikele amalunga azo ekuphindaphindeni kakhulu noma emsebenzini.
Cela umdlwane wakho ukuthi 'uhlale', ungawaniki umvuzo okwamanje
Bese uthi 'hlala' ngentende evulekile bese uthatha uhhafu wesinyathelo emuva
Uma umdlwane wakho uhlala esihlalweni, bavuze!
Uma behamba nawe, phinda ingxenye yokuqala, kodwa thatha igxathu elincane, noma uguqule ubheke emuva esikhundleni salokho
Sifuna ukuqeqesha umdlwane wethu waselebhu lokho kuhlala kusho ukugcina isikhundla kungakhathalekile ukunyakaza kukamama / nobaba. Ngokwenza lokhu bathola umvuzo!
Yakha ukuthi unganyakaza kangakanani (ukweqa izinkanyezi kuyisivivinyo esihle) nokuthi ukude kangakanani nomdlwane wakho. Lokhu kudinga ukwenziwa kancane kancane - izikhathi ezimbalwa lapho 'bephula' ukuhlala, kuba ngcono!
Khumbula ukwakha iziphazamiso noma nini lapho uqeqesha i-labrador yakho ngokuthile okusha , qala kwenye indawo lapho umdlwane ukwazi ukugxila kalula bese wakha kokuphazamisayo okuningi!
Njengomzali we-pup, uzobe umatasa kakhulu ugijima uzungeza ngemuva komdlwane wakho weLabrador ononya!
Iningi loqeqesho oluphakanyisiwe lungahlanganiswa nemikhuba. Isibonelo, ukuqeqeshwa kwekreyithi ngaso sonke isikhathi sokudla. Olunye uqeqesho luyizindlela ezinhle zokudinisa umdlwane wakho nokuwugcina kuvuseleleke ngokwengqondo ngakho-ke kungenziwa ngezikhathi ezithile usuku lonke!
Gcina amaseshini amafushane futhi usakaze kulo lonke isonto kunezikhathi ezinde! Kungathatha amasonto ukuthi imidlwane ikwazi ukuqeqeshwa ngezimbiza noma ukuqeqeshwa ngekhreyithi - ngakho-ke njengakho konke ukuqeqeshwa kweLabrador, bekezela futhi ungaguquguquki.
Ungazizwa ukuthi kufanele ukwenze wedwa, ukubhalisa wena kanye nomdlwane wakho welebhu yakho ibe yikhwalithi enhle, isikole sokuqeqesha esiqinisayo siyindlela enhle yamasu wokufunda, ukuzijabulisa nokuthola ukwesekwa kwabanye abazali.
Abaqeqeshi abaningi banikela ngokubonisana emakhaya, futhi lokhu kungaba yindlela enhle yokusiza nganoma yiziphi izingqinamba ezithile zokuqeqeshwa. Sazise uma unanoma yimiphi imibuzo ephakamayo lapho uqeqesha ilebhu yakho ngezansi!
USnorkie: Yazi le nja ethandekayo futhi ezinikele
ukuhlanganiswa kwe-aussie / border collie
imidlwane ye-french bulldog ngentengo yokuthengisa
umalusi waseJalimane oxutshwe ne-retriever yegolide
umalusi waseJalimane nomxube we-retriever